အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
MM // EN
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့ နေ့လည် ၁၄:၀၀နာရီအချိန်တွင် Video Conferencing ဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) သက်တမ်းတိုးမြှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့လာသည့် MOU (မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာဘက်မှ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် လိုသည့်အချက်များကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ ထားမှုအပေါ် အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ကြားပေးရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းအတည်ပြုချက် ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ ကော်မတီများနှင့်ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များရရှိရေးဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများစေလွှတ်မှု အခြေ အနေများနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်မှတစ်ဆင့် EPS စနစ်ဖြင့် လုပ်သားစေလွှတ်ခြင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိစုစုပေါင်းလုပ်သား (၄၁,၅၃၈)ဦးစေလွှတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသဖြင့် လုပ်သားစေလွှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လုပ်သားစေလွှတ်ခြင်း ကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီး ၂-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ Re-entry လုပ်သားများကို ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့ရာ ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ Re-entry လုပ်သား (၁၉၅)ဦးကို စေလွှတ်သည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ Re-entry လုပ်သားလက်ခံမှုကို ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သဖြင့် ထွက်ခွာရန်စောင့်ဆိုင်း နေသည့် Re-entry လုပ်သား အများအပြားကျန်ရှိနေပြီး အဆိုပါ လုပ်သားများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ EPS-TOPIK ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီး တန်းစီဇယား တွင် ကျန်ရှိနေသူ (၄,၁၄၃)ဦးနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ တွင် ၄ နှစ် ၁၀ လလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Re-entry လုပ်သားအဖြစ်ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်လုပ်သား(၁,၁၃၀)ဦးတို့ကျန်ရှိနေသဖြင့် အဆိုပါအလုပ်သမား များ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊
၁၂ ကြိမ်မြောက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသူများအနက် အလုပ်ခေါ်စာ မရရှိသေး၍ တန်းစီဇယားတွင် ကျန်ရှိနေသူ (၃,၄၈၁)ဦးသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း တန်းစီဇယားသက်တမ်း (၂) နှစ် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ တန်းစီဇယား သက်တမ်း ကို(၁)နှစ် ထပ်မံတိုးပေးနိုင်ရေး အခြေအနေများ၊ COVID-19 ကာအတွင်း အသွားအလာ ကန့်သတ် ချက်များကြောင့် ၁၄ ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အတွက်လျှောက်လွှာ ထုတ်ပေး / လက်ခံခြင်းကို Mobile Application အသုံးပြု၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း HRD-Korea မှ ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်အကြောင်း ကြားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သားသစ်များ စတင်စေလွှတ်ချိန်တွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံသတ်မှတ်ထားသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် များနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေးအခြေအနေများစသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများ စေလွှတ်နိုင်ရေး အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေ အနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
လအလိုက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အခြေအနေ
LEO System နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ
အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကိုရီးယား EPS ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
National Skill Standard Authority (NSSA)
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စာရင်းများ
ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ပေးအမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အခါအားလျော်စွာဖော်ပြလျက်ရှိသည့် သတင်းများ
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ လအလိုက် ဆောင်ရွက်မှု
အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
ခုံသမာဓိကောင်စီ မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် အငြင်းပွားမှုများ
ခုံသမာဓိ အဖွဲ့များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
လအလိုက် သတင်းများ Select Month October 2021 September 2021 August 2021 June 2021 May 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့ရုံးများတွင် အငယ်တန်းစာရေး ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးများ ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားသူများအမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမွေးထုတ်နိုင်ရေးကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း
အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
Copyright www.mol.gov.mm. All right reserved.